Hebei Runfeng cryogenic Equipment Co., Ltd.bụ ụlọ ọrụ ohuru ohuru ohuru ohuru ohuru, imeputa na nyocha nke ugbo ogwu di ala. Ngwaahịa na-eduga ngwaahịa bụ karama a na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ dị ala, tankị nchekwa nchekwa dị ala, D1, ụgbọ mmiri nrụgide D2 na ngwaahịa ndị ọzọ. Ihe a na-emepụta kwa afọ nke karama okpomọkụ dị ala karịrị 40000, na nke tankị nchekwa karịrị 2000. companylọ ọrụ ahụ nwere igwe akụrụngwa hydraulic na-agbanwe igwe, nnukwu akara ọnụọgụ akara igwe anọ na-agbanye igwe, igwe akpaka na-achịkwa akara ogologo oge. , igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, ihe mgbapụta na-ekpo ọkụ ọkụ, CNC winding machine, spraying electrostatic, helium mass spectrometer leak detector, spectrum analyzer, automatic flaw detector, magnet ntụ ntụ nchọpụta, X-ray dijitalụ onyonyo usoro na ndị ọzọ na mmepụta na ule akụrụngwa. Companylọ ọrụ ahụ nwere ihe karịrị ndị ọrụ 200, gụnyere ihe karịrị mmadụ 50 nwere akara mmụta mahadum ma ọ bụ karịa, ihe karịrị mmadụ 30 nwere akara ugo mmụta bachelor ma ọ bụ karịa, karịa 20 nkà na ụzụ dị elu na ndị injinia, nwere ike dị ike na usoro mmesi obi ike zuru oke. Companylọ ọrụ ahụ na-etinye ego buru ibu kwa afọ maka mmepe na ule nke teknụzụ ọhụrụ na ngwaahịa ọhụrụ. Gbalịsie ike ịmepụta ụlọ ọrụ ọkọlọtọ na ụlọ ọrụ okpomọkụ dị ala.
E guzobere 1983 Runfeng Enterprise
Runfengfeng Enterprise e hiwere na 1983. Kemgbe ọ malitere, ọ eguzobewo 4 ụlọ ọrụ successively iji wuo ike ike zuru ezu na-eje ozi nke oge a ụlọ ọrụ, na ịzụlite nwayọọ nwayọọ na-amaja innovate. Ha bụ Runfeng Mechanical and Electrical, Runfeng Machinery, Container Runfeng na Runfeng Commercial Concrete tọrọ ntọala maka iru ebumnuche nke iwulite ụlọ ọrụ.
Edere 2004 Runfeng Electromechanical ma hibe ya
E debanyere Runfeng Electromechanical ma hiwe ya na 2004. officelọ ọrụ ụlọ ọrụ azụmahịa bụ square mita 8,000 na ụlọ nkwakọba ihe dị mita 20,000. The ụlọ ọrụ tumadi na-elekwasị anya na n'ùkwù na retail eletriki switches, Fans, mmiri nfuli, ngwaike ngwaọrụ, na akpaghị aka ike nkesa usoro. Ma guzobe mmekọrịta ogologo oge na ndị nrụpụta ụlọ ama ama.
2005 Runfeng Machinery e aha ma guzosie ike
Runfeng Machinery e guzobere na 2005 na-enye ndị ahịa na-elu-edu ngwaahịa site n'ichepụta na wụnye elu na ala voltaji ike nkesa cabinets, igbe-ụdị substations, kpo oku usoro, mmiri usoro, hoisting ígwè, ihe onwunwe hoists, na ahaziri akụrụngwa.
E guzobere akụrụngwa Runfeng 2012
E guzobere akụrụngwa Runfeng cryogenic na 2012. companylọ ọrụ ahụ bụ ọkachamara na imepụta na imepụta arịa nrụgide, tankị nchekwa, gas gas cylinders, usoro zuru ezu nke akụrụngwa maka ọdụ gas, akụrụngwa gas, ụlọ ọrụ ikuku na-gas, nke ahaziri ọkọlọtọ ọkọlọtọ, na igbe dị oke nkenke.
E guzobere 2012 Runfeng Commerce Concrete
Runfeng Commerce Concrete e guzobere na 2012. The ụlọ ọrụ nwere ihe abụọ 180 mmepụta edoghi na-enwe kwa afọ na mmepụta nke 3 nde cubic mita nke azụmahịa ihe. Companylọ ọrụ ahụ na-akwado ọtụtụ gwakọtara gwakọtara na gwongworo mgbapụta 49-mita.
Nzube Ọrụ Runfeng
Runfeng nwere ihe karịrị ndị ọrụ 300, ndị injinia 41, yana karịa ndị ọrụ 70. N'okpuru njikwa nke ndị Runfeng, site na otu mbụ iji mezue akụrụngwa, site na atụmatụ atụmatụ na ntinye na ntinye na saịtị, site na ahụmịhe ọrụ ahịa na ọrụ ahịa zuru oke, ndị Runfeng siri ọnwụ na ha na-eje ozi ụlọ ọrụ ndị ọzọ iji ghọta nrọ ndị China dị ka ha ozi.